I-V yamahlaya nomncintiswano wemifanekiso EXPOCÓMIC | Izincwadi Zamanje
V EXPOCÓMIC Amahlaya Nomncintiswano Wemifanekiso
Izindaba Zamahlaya | | Imincintiswano Nemiklomelo, Imicimbi
Imithetho Yomncintiswano we-XNUMX we-EXPOCÓMIC Comic kanye Nemifanekiso
Umnqamulajuqu kuze kube ngu-Okthoba 24, 2008
ISpanish Association of Friends of the Comic, kanye neDolmen Publishing House kanye neC-10 Drawing Academy, imemezela i-V Edition ye-Comic and Illustration Contest.
Umncintiswano uvulekele noma yimuphi umhlanganyeli kulesigaba esisodwa noma eziningi, ngawodwana noma ngokuhlanganyela, ngokuba yilaba bantu abahlala eSpain. Bangathumela ubuningi bemisebenzi emithathu ngesigaba ngasinye. Imisebenzi eyethulwe kweminye imincintiswano enikiwe, noma ekhishwe nganoma iyiphi indlela kubandakanya ne-Intanethi, ngeke yamukelwe.
Ingqikithi izoba mahhala futhi inqubo ekhethiwe kufanele ivumele ukukhiqizwa kwayo okulandelayo. Imisebenzi ingavezwa ngombala nomnyama nomhlophe. Emkhakheni wamahlaya, izindaba zizoziphetha. Kuzo zombili izigaba indaba nabalingiswa kumele babe ngabokuqala. Imisebenzi izokwethulwa ngefomethi yephepha, imisebenzi ngefomethi yedijithali kufanele yethulwe ngohlobo oluthile lokuphrinta.
Isigaba samahlaya. Bazoba nesandiso esincane samakhasi ama-4 nobukhulu obungu-8 ku-A4 noma ifomethi elingana.
Isigaba Umfanekiso. Kumele zethulwe ngefomethi ye-A3 (esiphezulu) - A4 (ubuncane).
Akunasikhathi okuzolethwa okwangempela, kuthunyelwe amakhophi ekhwalithi ukubona umsebenzi wenziwa.
Ngemuva kwawo wonke amakhasi kufanele kufake phakathi: Isihloko Somsebenzi, Igama noma igama elingumbombayi lombhali nesigaba okulethwe kuso. Imvilophu enemininingwane yomuntu ephelele izofakwa kulokho okuthunyelwe: igama nesibongo, ikheli, inombolo yocingo kanye nekhophi ye-DNI.
Ukuthunyelwa kufanele kwenziwe ngokukhombisa ngaphandle kwemvilophu: Umncintiswano we-Expocómic 2008 ku:
C / Imeya uSanz de Baranda, 19
91 400 93 90
5.- Ukwahlulelwa komncintiswano.
Isinqumo somncintiswano sizokwenziwa esigabeni esisodwa futhi sizoba nejaji elenziwa: umculi wamahlaya, umhleli, umthengisi wezincwadi kanye nelungu le-Association of Friends of Comics. Isinqumo somncintiswano sizobekwa emphakathini ngoNovemba 3, 2008 kuwebhusayithi ethi www.expocomic.com.
Ijaji lizokhipha imiklomelo bese linquma ngezinkinga ezingaxazululiwe kule mithetho. Ngaphezu kwalokho, le miklomelo ingamenyezelwa njengeyize uma kubhekwa ukuthi imisebenzi ayinayo ikhwalithi edingekayo, kanye nomklomelo wesibili okhethekile kwamanye amahlaya akhishwe futhi awunikiwe.
Umklomelo uzonikezwa isigaba ngasinye. Umklomelo uzoba nohambo oluya e-Angouleme Comic Fair (Januwari 2009), okubandakanya: ukungena, ukuhamba eMadrid kanye nendawo yokuhlala yalowo nalowo ophumelele kanye nomngane wakhe. Ngaphezu kwemiklomelo elandelayo esigabeni ngasinye:
Umklomelo Wokuqala: Inkambo yonyaka ongakhetha kuyo esikoleni se-C-1 kanye nesethi yokudweba, kanye neqoqo lamahlaya (i-Editorial Dolmen) neqoqo i-Aprende a Draw Cómics kusuka ku-Editorial Dolmen. Futhi ukushicilelwa komsebenzi kukhathalogi ye-Expocómic 10 (nokusakazwa kwamakhophi ayi-2008 20.000).
Umklomelo Wesibili: Inkambo ejulile ongakhetha kuyo e-C-2 academy kanye nesethi yamathuluzi wokudweba, kanye neqoqo lamahlaya (i-Editorial Dolmen) kanye neqoqo elithi Funda Ukudweba Amahlaya kusuka ku-Editorial Dolmen. Nokushicilelwa komsebenzi kukhathalogu ye-Expocómic 10 (esakazwa ngamakhophi ayi-2008 20.000).
Umklomelo We-3: Inyanga eyodwa enkambweni yokudweba oyikhethile esikoleni se-C-10 kanye nesethi yamathuluzi okudweba kanye neqoqo lamahlaya (i-Editorial Dolmen).
Okwangempela kuyimpahla yabalobi. Inhlangano inelungelo lokusebenzisa imisebenzi ethunyelwe isikhathi esingenamkhawulo nganoma iyiphi injongo, ihlale ikhomba igama lomlobi futhi ingakushintshi okuqukethwe kwayo. Okwangempela okuthunyelwe ngephutha noma ngesinqumo sombhali ngeke kubuyiswe.
Abaphumelele bazoletha okwangempela, kungakapheli izinsuku ezinhlanu kusukela ngesikhathi sokuxhumana kwesinqumo sejaji, esizokhonjiswa embukisweni okhethekile ngesikhathi se-Expocomic 2008, etholakala ukuhoxiswa ezinsukwini eziyishumi nanhlanu ngemuva kokuphela kombukiso e amahhovisi nguTerracómic.
Ukubamba iqhaza kulo mncintiswano kusho ukwamukelwa kwalezi zisekelo. Noma yisiphi isici esingalindelekile kulezi zisekelo sizoxazululwa yinhlangano noma yijaji.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Imincintiswano Nemiklomelo » V EXPOCÓMIC Amahlaya Nomncintiswano Wemifanekiso
Umklomelo kaNobel uba yingxabano phakathi kwamazwe
Umncintiswano wesibili kazwelonke wokudalwa kwamahlaya